25422395 | Steem Block | Steem
Prev | Next Block 25,422,395
17 transactions in this block, produced at 2018-08-27 02:21:09 (UTC)
afrinsultana replied to @r2cornell/re-afrinsultana-re-r2cornell-fl… Aug 27 '18
anomadsoul upvote @trenz/re-anomadsoul-el-precio-es-correcto-para-pu… (1%) Aug 27 '18
cecicastor replied to @papa-pepper/my-biggest-pygmy-rattler-yet Aug 27 '18
cryptocoinhub upvote @followmikecee/rundblick-uebers-barrio-bonito-sant… Aug 27 '18
konratek upvote @kantor/exchange-of-votes-on-sbd-160 Aug 27 '18
steem delegate 4.964 SP to jpmvedv13 Aug 27 '18
captainstar replied to @suran/40-4 Aug 27 '18
gijog upvote @beatminister/steem-tipp-spiel-game-resultat-resul… Aug 27 '18
rambo21 upvote @agcoeficiente10/a-bakery-in-tokyo-emotional-essen… Aug 27 '18
payel upvote @procaptainjoe/universal-studios-singapore-2018-08… Aug 27 '18
pbgreenpoint upvote @pbgreenpoint/football-injury-updates Aug 27 '18
tuema transfer 0.050 SBD to steemmonsters sm_market_purchase:3e3828011c73646fa468c220062291e19da849a4-0 Aug 27 '18
coin.info replied to @g2b2018/southkoreancryptocurrencyexchange… Aug 27 '18
tommymartinez upvote @thecatfiles/cat-toxoplasmosis Aug 27 '18
jfmrt15 upvote @feuerelfe/goettlicher-besuch Aug 27 '18
shinnthant authoredapost: @shinnthant/bamboo-wa Aug 27 '18
shinnthant upvote @shinnthant/bamboo-wa Aug 27 '18
kejsermanden upvote @luxsheng/usdpoly-polymath-analysis Aug 27 '18
"He isabeautiful snake, but I don't think I would be too happy sharing my homestead with him. I agree that kids could have some really bad reactions to the venom. What about small animals?"
**BTC** | Bitcoin | 6699.092$ | _-0.4%_ | _3.05%_
**ETH** | Ethereum | 273.953$ | _-0.94%_ | _-9.12%_
**HTML** | HTMLCOIN | 0.000$ | _-0.23%_ | _-1.81%_
**XRP** | XRP | 0.323$ | _-0.83%_ | _-6.37%_"
ပေါများစွာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် ဝါး ကို အသုံးပြု
ပုံ အသုံးဝင်ပုံ အများအပြား ရှိတဲ့ထဲမှ
ဝါးပင်မှထွက်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင် ဝါးရေအကြောင်း တင်ပြပေးပါမယ်။
"ဝါးရေ" ဆိုတာ တရုတ်နဲ့ ထိုင်းမှာ လူပြောများနေတယ်။ ဝါး အတွင်းသားထဲက ထွက်တဲ့ရေ။ ရေရိုးရိုးလိုဘဲ အရောင်မရှိပေမယ့် အနံ့အရသာကတော့ ထူးခြားတယ်လို ဆိုတယ်။
■သူ့ကို သောက်သုံးရင် ဆီးကျောက် ၊ သည်းချေကျောက်များကို ကျေမွစေပြီး ဆီးချိုကိုလည်း ကျစေတယ်ဆိုတယ်။ မျက်စေ့တိမ်စွဲခြင်းကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်။
သူ့ရဲ အဓိကလုပ်ဆောင်မှုက ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး သူ့ကို သောက်ပြီးတာနဲ့ တကိုယ်လုံး ပေါ့ပါး လန်းဆန်းသွက်လက်သွားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
အခြား ဘာရောဂါကြီးတွေ ပျောက်နိုင်လဲဆိုတာတော့ စူးစမ်းလေ့လာဆဲ ရှိပါသေးတယ်။
ကိုယ့်အိမ်မှာ ဝါးပင်တစ်ပင်လောက်ရှိရင် ဒီဝါးရေကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူလို့ရတယ်။
အောက်က သူများရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေး ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
လူသိမများသေးတဲ့ ဝါးပင်မှထွက်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင် ဝါးရေ တဲ့။
■ထန်းပင်မှထန်းရေထွက်တာသိပေမယ့် ၊ဝါးပင်မှဝါးရေထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာ ခုမနက် BBC ဦးဝင့်မြင့်(အမည်မှတ်ရာမှာ အာနည်းသူမို့ အမည်မှားပါက ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်)ကဏ္ဍကိုနားဆင်မှသာ မထမဆုံးသိခွင့်ရပါတယ်။ဝါးရေကို ဆေးဖက်ဝင်အဖြစ်နဲ့တရုတ်ပြည်မှာ ရောင်းစားလာတာ ကြာပြီလို့ဆိုပါတယ် ။ထိုင်းမှာတော့အဲလိုဝါးရေ ထုတ်ရောင်းတာ ကြာသေးပုံမရပါ။ဒါပေမယ့် ခုခါမှာ တွက်ခြေကိုက်လို့ အပြိုင်အဆိုင်တွေပါ တိုးလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ထိုင်းဝါးရေတန်ဖိုးဟာ တစ်လီတာကို ၁၅ ဘတ်ရှိပါသတဲ့ ။တရုတ်မှာတော့ဒီဈေးထက်အဆများစွာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဝါးရေဟာ ဆီးရောဂါနဲ့ဆီးမှာကျောက်တည်ရောဂါသာမက မျက်စေ့တိမ်စွဲနာပါ ပျောက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဝါးရေကို ဒီလိုယူပါတဲ့ ။
ဘယ်ဝါးမျိုးမဆို ဝါးရေယူလို့ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝါးကိုင်ဖျားမှယူမယ်ဆို အနိမ့်အမြင့်ညီသော ဝါးကိုင်းလေးများကိုလှီးဖြတ်ခါ ပလပ်စတိတ်အိတ် သို့မဟုတ် ပုလင်းဖြင့်ခံယူနိုင်သလို ၊ဝါးပင်ရင်းနှစ်လက်မကွာမှာ လွန်သွားဖြင့်အပေါက်ဖေါက်ကာ သင့်လျှော်ရာပိုက် ပုလင်းများဖြင့်လဲ ရယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဝါးရေကို ခံယူရာမှာ ညအချိန်အထူးသဖြင့် မနက်စောစော (၃) နာရီလောက်ဟာ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။ ကိုင်းဖျားကယူရင် တစ်နေ့ကို တစ်လီတာလောက်သာရနိုင်ပေမယ့်၊ပင်ရင်းမှယူပါက တစ်န့လျှင် ၅ လီတာခန့်ထိရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပင်ရင်းမှ ယူတဲ့ခါ လေဟာနယ်ကိုပိတ်တဲ့အနေနဲ့ ဖယောင်းကိုသုံးရမယ်လို အကြံပြုထားပါတယ်။သောက်သုံးရာမှာလဲ အရောင်အဆင်းမရှိသော်လဲ ထူခြားစွာ ရေ အရသာကိုခံစားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သောက်သုံး သယ်ယူရာမှာ ဒါလေးကိုတော့ သတိပြုပါ တဲ့။
ရေခဲသေတ္တာ ဒါမှမဟုတ် ရေခဲဘူးထဲမှာထည့်ပြီး သောက်ပါ သုံးပါ သယ်ယူပါလို့ ဆိုပါတယ်။ဝါးရေအပြာရောင်သမ်းလာရင် မသောက်သုံးသင့်ပါလို့ သတိပေးထားပါတယ်။
မကြားစဖူး ထူးခြားတာရယ် ၊ဆေးဖက်ဝင်တာရယ်၊ဝါးပင်ပိုင်ရှင်များနဲ့ ဝါးထမ်းရောင်းသူလေးများအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အပိုဝင်ငွေ ရစေလိုတဲ့စေတနာနဲ့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ဆေးဖက်အမှန်ဝင်၍ ဝါးပင်ပိုင်ရှင်နဲ့ ဝါးထမ်းရောင်းကာ ဝမ်းစာရှာကြသူများ အကျိုးစီးပွား တိုးများနိုင်ကြပါစေသား။